के हुन्छ स्तनको स्पर्शले ? जान्नुहोस् वैज्ञानिक तथ्य - Dainikee News::
के हुन्छ स्तनको स्पर्शले ? जान्नुहोस् वैज्ञानिक तथ्य
काठमाडौं । स्तन महिलाहरुको यौन उत्तेजनामा योनी जति संवेदनशील हुन्छ । स्तनको टुप्पो पनि त्यस भन्दा कम हुँदैन । हुनत यो यथार्थ जान्ने र भोग्ने हरुले थाहा पाएकै कुरा हो । तर किन यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा भने हालै मात्र वैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाएका छन् ।
त्यसैले केही महिलाहरु स्तनको स्पर्श वा सुम्सुम्याइबाटै चरम आनन्द प्राप्त गर्न सक्ने अनुसन्धानकर्ताहरुको भनाइ छ ।अर्थात् स्तनमा हुने यहीँ संवेदनाको संचार र स्नायु सम्बन्धका कारण स्तनको भरपूर स्पर्शले मात्र पनि महिलाले चरम आनन्द प्राप्त गर्न सक्छिन् र उनलाई योनी र लिंगको मिलन आवश्यक पर्दैन ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ १६, २०७५ /Wednesday, January 30th, 2019, 4:55 pm